Yan Aung: အနီရောင် ထောင်ချောက်
ပထမ နံရံနီနီကြီးကို heart လို့ထင်နေတာ။ heart ထဲက တခုခု (blood clot)တိုးထွက်နေတယ်မှတ်တာ နောက်ထွက်လာတော့ "အူဝဲ"တဲ့။ :D
မိုက်တယ်။ ရေးထားတာ။ :) အူဝဲမတိုင်ခင်အထိ တော်တော် စဉ်းစားယူလိုက်ရတယ်။
မိုက်တယ် ဗျာ ရေးထားတာ :)
ဟိ ... ၀ဲအု .... :P
အူဝဲကို တွေ့တော့ အစကပြန်ဖတ်ရတယ်…။ nice post bro…!!
>မမြရွက်ဝေရေ... Blood Clot တော့ မထွက်လိုက်ပါနဲ့. ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်. (ဟတ်ဟတ်)
>မသဉ္ဇာ... မတွေ့တာကြာပေါ့. အူဝဲလို့အော်မှပဲ လာဖော်ရတော့တယ်နော့. ဒါဆိုလည်း ထပ်အော်ဦးမယ်ဗျာ. ဒီတစ်ခါတော့ ကိုစိုးထက်ကြီးအော်သလိုပေါ့. ၀ဲအု... ဟတ်ဟတ်ဟတ်... လေးမရေ... စိတ်မလောနဲ့လေ. အစကပြန်ဖတ်မှ ဇာတ်ရည်လည်ပြီး အူဝဲဆိုတာ ဘာဆိုတာ သိမပေါ့. စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့. :)
အူဝဲ ဆိုတော့ မှ ပဲ ပေါက်တော့တယ်... ဟိဟိ
ဇာတ်လမ်းရဲ့ Plot ကိုလုပ်ထားတာ ရော အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ပုံရော အရမ်းသေသပ်တယ် အစ်ကိုရာ..။ လေးစားလောက်ပါ တယ်..။
အကိုရေးထားတာလေး မိုက်တယ်။ သရုပ်ဖော်ထားတာ ကောင်းတယ်။
ဒီပို့စ်ကလေးက တကယ့်ကို အနှစ်ပါပဲဗျာ။ စာသားတချို့ ထောက်နေတာက လွဲရင်ပါ။ ဒီပို့စ်ကလေးကို ကျနော့်အကြိုက်ဆုံးပို့စ်အဖြစ် ကျနော့်ဘလော့မှာ ကူးခွင့် ပြုပါနော်။ နော်
မိုက်သကွာ ကိုရန်အောင် ။ တယ်ကောင်းသကိုးကွယ့်။
အဲ နောက်တခါဆိုရင်တော့ ကယ်တင်ရှင်ကိုပြောလိုက်ပါရှင်။
အူဝဲ အလိုက်သိတတ်ပါတယ်လို့ နော်...
အူဝဲ .... ကောင်းလိုက်တာဗျာ ...။
တမေ့တမောပဲ အူဝဲဆိုမှပဲ ပြုံးမိတော့တယ် ...။